Umzi mveliso weengxowa zokutya eChina Beyin ukupakisha
Elungiselelweyo OEM ibhegi chips evela China
Iibhegi zeetshipsi zinokuveliswa, ezinje ngeebhegi zokuma, iibhegi ezithe tyaba, iingxowa ezithe tyaba ezantsi, njl.njl.
I-China ihowuliseyili ibhegi yepopcorn
I-Popcorn, njengenye yamashwamshwam athandwayo, yamkelwe ngokubanzi eYurophu naseMelika. Ngelixa iingxowa zepopcorn zesiko, abantu bakhetha umbala omthubi njengesiseko, kuba tyheli ngumbala owuthandayo kakhulu popcorn. Ngaphandle koko, uninzi lwabantu lukhetha ibhegi esecaleni esecaleni njengemifanekiso engezantsi. Kwiingxowa zepopcorn eziqhelekileyo, abantu bayathanda ukuba nayo kumphezulu ocwebezelayo, i-PET / I-FOIL-PET / PE, ngelixa kukho iibhegi zepopcorn ezifuna ukuzaliswa nge-nitrogen, emva koko izinto ezingcono kunokuba yi-PET / FOIL-PET / CPP. Malunga nobukhulu, kuba ipopcorn ilula kakhulu, ngokubanzi ii-microns ezingama-60 ziya kujongeka zilungile kwaye zinokusebenziseka, kodwa abantu abaninzi bayathanda ukwenza ukuba ibhegi yabo ijongeke kumgangatho ophezulu, ke basebenzisa ii-microns ezingama-80, i-100 microns, i-microns ezili-120 nangaphezulu.
Elungiselelweyo ibhegi yejear yenkomo yenkomo
Uninzi lwabantu lusakhetha ukuma kwe-zip lock biltong bags, nokuba zikhona ngefoyile okanye ngaphandle kwefoyile, iplastiki okanye iphepha, ubukhulu becala bathanda umphezulu womgangatho, uziphu, ukujonga umngxunya weyuro kunye nefestile. Ubunzima obuvela kwi-80-150 yee-microns, ngesiqhelo i-100 okanye i-120 microns ziya kulunga ngokwaneleyo ukuba zingasetyenziswa.
Kwiingxowa zeetshokholethi, uninzi lwabantu luthanda iintlobo ezimbini, yima ngeengxowa zokutshixa i-zip kunye neebhegi zegusset esecaleni. Awunakho ukuthi i-whilch ibhetele, kodwa ukuba umthamo omncinci, yiya nje kunye neebhegi zokuma, ngelixa ubungakanani obukhulu, ibhegi yegusset esecaleni iya kuba lukhetho olungcono.
Xa usenza ibhegi yeelekese, okokuqala kufuneka wazi ukuba ngubani oza kukuthengela iilekese, emva koko kufuneka wenze uyilo oluchanekileyo lokutsala amehlo abo. Umzekelo, uninzi lwabantwana alunakuxhathisa isilingo seelekese, emva koko indlela yokwenza abantwana bathande ilekese yakho, yenza ibhegi yeelekese eyiyo kuqala, cos akukho mntu waziyo ukuba yintoni eya kuba ngaphakathi ngaphambi kokuba bavule ibhegi. Bathanda ntoni abantwana? Imibala emihle, izilwanyana, iintyatyambo, zonke izinto ezilungileyo.